Trinite sy Tobago · Aogositra, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Trinite sy Tobago · Aogositra, 2019
Tantara mikasika ny Trinite sy Tobago tamin'ny Aogositra, 2019
Nipoitra ny tantaram-pifandraisan'ny governemanta sy ireo lehiben'ny jiolahy ao Trinité sy Tobago
Fitantanam-pitondrana19 Aogositra 2019
A local newspaper exposé shows how government contracts have contributed to the flourishing of gang culture in Trinidad and Tobago. Nampiseho ny fomba nahatonga ny fifanarahan'ny governemanta nampiroborobo ny kolontsain'ny jiolahy ao Trinité sy Tobago ny fanadihadiana nataon'ny gazety tao an-toerana.
Ny hatsaràna mambabo ao Karaiba aseho amin'ny Instagram
Antigoa sy Barboda10 Aogositra 2019
Gazetiboky roa miavaka miresaka ny fivahinianana ao amin'ny faritra no mankalaza ny hatsaràna natoralin'i Karaiba, amin'ny fiantsoana ny fahatongavantsaina hijery ireo fitodiana ara-pizahantany tsara indrindra ao aminy — vita printy ary ao amin'ny Instagram koa!
Tokony hampody ny fianakavian'ireo olona nampiasain'ny ISIS ve i Trinite sy Tobago?
Ady & Fifandirana09 Aogositra 2019
Trinite sy Tobago no nahitana isan'ny mpiadin'ny ISIS betsaka tany amin'ny ilabolantany andrefana. Tsy maintsy manapa-kevitra ankehitriny ny firenena raha hampody ireo niankina tamin'ny mpiadin'ny ISIS ireo na tsia.
Lalàna07 Aogositra 2019
Tranonkalan'ny governemanta ao Trinité sy Tobago maherin'ny ampolony no nolotoina tamin'ny fitrandrahana piraty izay heverina ho ilay fijirihana informatika lehibe indrindra tsy manampaharoa mbola tsy fahita hatramin'izay tao amin'ny firenena.
Andron'ny Fahafahana ao Trinidad & Tobago — fa tena afaka tokoa ve aloha ilay firenena e?
Foko sy Fiaviana06 Aogositra 2019
"Fonosin'io fahafahana io daholo ny fahafenoana sy ny harena maha-ianao anao, ny niavianao, ny rà sy ny tantara mikoriana ao anatinao."
Lavin'ny praiminisitra ao Trinidad sy Tobago ny hanameloka ny lehiben'ny fitsaràna
Lalàna04 Aogositra 2019
"Ny fehinkevitra hitako ao anatin'ny toedraharaha rehetra dia hoe tsy ampy ho entina manamarina [...] hoe mila anaovana fanadihadiana ny fanesorana ny filohan'ny fitsaràna"